विदेशी खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा Semalt साझा गोप्यहरू
Semalt सेयरहरू विदेशी खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा गोप्य कुराहरू
तपाइँ तपाइँको देश मा एक कम्पनी को प्रबंधन, तर तपाइँ नाफा बढाउन र युरोप को अन्य क्षेत्रहरु र विश्व मा आफ्नो वेबसाइट मा प्रस्ताव वा सामग्री को प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ। यस उद्देश्यको लागि, तपाईं विदेशी स्थिति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लेख पढ्नुहोस् र अन्य देशहरूमा SEO मार्फत तपाइँको साइटलाई कसरी सफलतापूर्वक प्रवर्द्धन गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
मैले तपाईंलाई विदेशी स्थितिको बारेमा के जान्न आवश्यक छ भनेर देखाउन सुरु गर्नु अघि, म तपाईंलाई दुई महत्त्वपूर्ण विश्लेषणहरू गर्न आमन्त्रित गर्दछु:
उद्योग - बजार र प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू बारे।
प्राविधिक - तपाइँको वेबसाइट को बारे मा, साथै कम्पनीहरु को वेबसाइटहरु संग तपाइँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ।
यसले तपाईलाई विदेशी बजारको सम्भाव्यता प्रयोग गर्न सफलतापूर्वक लड्न सक्षम हुनुहुन्छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन मद्दत गर्नेछ।
तपाईले पहिलो विश्लेषण आफैं गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जबकि एसईओ अडिट एक विशेषज्ञलाई कमिसन गरिनु पर्छ जसले तपाईको उद्योगमा वेबसाइटहरूको लागि दिइएको भाषामा स्थितिको प्राविधिक पक्षहरू र Google खोज इन्जिनको परिणामहरूमा ध्यान दिनेछ।
अब विदेशी खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि खातामा लिन महत्त्वपूर्ण तत्वहरूमा जाऔं!
बजार विश्लेषण र प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू
विदेशी बजारहरूमा प्रवेश गर्नु अघि, विदेशी वेबसाइटहरू कसरी बनाइन्छ र तिनीहरूमा कुन सामग्री छ, साथै तिनीहरू कुन भाषामा लेखिएका छन् भनेर जाँच गर्न लायक छ। वेबसाइट पोजिसनिङको योजना बनाउँदा, उदाहरणका लागि बार्सिलोना र क्याटालोनियामा, त्यहाँका लोकप्रिय पृष्ठहरूमा स्प्यानिश वा क्याटालानमा पाठ छ कि छैन भनेर जाँच गर्न लायक छ। गहिरो विदेशी पानीमा हाम फाल्नु अघि सकेसम्म धेरै बारीकनहरू जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसकारण, विदेशमा वेबसाइटको स्थिति सुरु गर्नु अघि, कम्तिमा त्यस्ता मुद्दाहरू प्रमाणित गर्नुहोस्:
सम्बन्धित देशमा बोलिने भाषा र बोलीहरू;
विदेशी कम्पनीहरू वा वेबसाइटहरूमा विश्वास गर्नुहोस् जुन डोमेन विस्तार अर्को देशलाई औंल्याउँछ;
दिइएको देशमा विभिन्न खोज इन्जिनहरू (जस्तै गुगल, याहू, बिंग, यान्डेक्स आदि) को बजार साझेदारी, प्रयोग गरिएका उपकरणहरू;
समान पृष्ठको लागि जैविक परिणामहरूबाट सम्भावित ट्राफिक, अधिमानतः तपाइँको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा;
घरेलु डोमेनको खरिदमा प्रतिबन्धहरू;
एक व्यवसाय चलाउन सम्बन्धित कानूनी र लेखा मुद्दाहरू;
भुक्तान र यातायात, फिर्ता, ग्यारेन्टी, आदि को रूप मा उपभोक्ताहरु को बानी।
यदि तपाईले सकेसम्म धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईलाई यो निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ कि यसले विदेशी बजारहरूमा प्रवेश गर्नको लागि व्यापारिक अर्थ राख्छ। यदि त्यसो हो भने, तपाइँसँग पहिले नै थप SEO गतिविधिहरूको लागि आधार हुनेछ।
तपाईको वेबसाइट र प्रतिस्पर्धाको एसईओ अडिट
अब तपाईं सम्भावित वेबसाइट र व्यापार परिवर्तनहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ र, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले व्यापार विकासको लागि अवसरहरू देख्नुहुन्छ। त्यसोभए, अर्को चरण तपाईको वेबसाइटको एसईओ अडिट र दिइएको बजारमा सम्भावित प्रतिस्पर्धा निर्धारण गर्ने हो।
यो कार्य एसईओ एजेन्सी वा विशेषज्ञलाई आउटसोर्सिङ गर्न लायक छ जसले आवश्यक स्थिति गतिविधिहरूको सन्दर्भमा लक्षित देश प्रमाणित गर्नेछ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू मध्ये एक हो किनकि यसले तपाईंको भविष्यको SEO रणनीतिको लागि सुरूवात बिन्दुको रूपमा काम गर्नेछ।
लेखापरीक्षणमा निम्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ:
सम्भावित "प्रवेश अवरोध" को प्रमाणीकरण (पहिलो खोज इन्जिन ट्रान्जिसनहरू प्राप्त गर्नको लागि औसत समय);
दिइएको देशमा तपाईंको वेबसाइटसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पृष्ठहरूको पहिचान;
प्राविधिक एसईओ मुद्दाहरूको प्रमाणीकरण, खोज इन्जिन परिणामहरूमा डोमेन विस्तार सहित, वास्तुकला र सामग्री भोल्युम;
ट्राफिक स्रोतहरूको प्रमाणीकरण र निःशुल्क खोज इन्जिनहरूको नतिजाबाट तिनीहरूको अनुमान;
प्रतियोगीहरूको वेबसाइटहरूमा आधारित स्थिति लागतको अनुमान;
प्रतिस्पर्धामा ऐतिहासिक वृद्धिको आधारमा प्रभावहरू प्राप्त गर्न सम्भावित समयको योजना बनाउँदै।
एसईओ अडिट पूरा भएपछि, तपाईं स्थितिसँग सम्बन्धित थप गतिविधिहरूमा जान सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा पहिले, तपाईंले दिइएको विदेशी बजारमा खोज इन्जिन पदोन्नति सञ्चालन गर्न वेबसाइट समायोजन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ सामान्यतया प्रश्नहरू उत्पन्न हुन्छन्:
SEO गतिविधिहरूमा प्रयोग गरिने नयाँ डोमेन वा सबडोमेनहरू;
भाषा संस्करण, अनुवाद व्यवस्थापन, आदि को मामला मा वेबसाइट संरचना मा परिवर्तन;
प्राविधिक अनुकूलन, Hreflang र lang ट्यागहरू सहित, विभिन्न भाषा संस्करणहरू बीच लिङ्क।
यो किन यति महत्त्वपूर्ण छ? उदाहरणका लागि, जर्मनीका प्रयोगकर्ताहरूले राष्ट्रिय विस्तार भएका पृष्ठहरू छनौट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, अर्थात् .de. इङ्गल्याण्डमा पनि त्यस्तै छ, जहाँ .co.uk वा .uk डोमेनहरूले थप विश्वासको आनन्द लिन सक्छन्। तसर्थ, .pl डोमेनमा वेबसाइटको प्रवर्द्धन गरेर, तपाईले राम्रो स्थान भए पनि अर्गानिक खोज इन्जिन परिणामहरूबाट कम ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
स्थिति सम्बन्धी थप काम
एसईओसँग सम्बन्धित अर्को चरणहरू संसारभरि समान स्थिति हो। लेखापरीक्षणका अनुसार वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको सन्दर्भमा ठूला र साना परिमार्जन गरिएको छ।
थप रूपमा, किवर्ड अनुसन्धान पछि नयाँ सामग्री तयार गर्न वा अवस्थित सामग्री विस्तार गर्नको लागि गरिन्छ, जबसम्म यो अडिटको तत्व होइन। यी कुञ्जी शव्दहरू यस कार्यको लागि योग्य कुञ्जी शब्द जनरेटर उपकरणद्वारा छनोट गरिनुपर्छ जस्तै समर्पित SEO ड्यासबोर्ड। हामी यस लेखको बाँकी भागमा थप विवरणमा जानेछौं।
निस्सन्देह, वेबसाइट (अन-पेज) को क्षेत्रमा कामहरू बाहेक, अफ-पेज गतिविधिहरू प्रदर्शन गरिन्छ, जसमा डोमेन र वेबसाइटद्वारा अधिकार प्राप्त गर्ने, साथै बाह्य लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने समावेश हुन्छ। लिङ्क स्रोतहरूको उदाहरणहरू एसईओ विश्लेषणमा पनि संकेत गर्न सकिन्छ।
विदेशी बजारहरूको लागि स्थितिको लागि वेबसाइट कसरी तयार गर्ने?
SEO गतिविधिहरू सुरु गर्नु अघि, खोज परिणामहरू विश्लेषण गर्न सार्थक छ। साथै, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को प्रवर्द्धन गर्न चाहानु भएको स्थान मा सञ्चालन प्रतिस्पर्धा जाँच गर्नुहोस्। हामीले एसईओ अडिटमा यस चरणको बारेमा कुरा गर्यौं, जुन कुनै पनि परिवर्तन गर्नु अघि गर्न लायक छ। यस विषयमा, हामी यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्ने उपयुक्त उपकरणको बारेमा थोरै कुरा गर्नेछौं।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड: विदेशी SEO को लागी वेबमास्टर्स को मनपर्ने उपकरण
मैले भनेको थिएँ, विदेशी बजारमा आफूलाई राम्रो स्थान दिनको लागि, एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको तपाईंले आफूलाई स्थान दिन चाहेको बजारको प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्नु हो। यसका लागि तपाईंलाई प्रभावकारी उपकरण चाहिन्छ, ताकि तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वास संग र बजार मा एक राम्रो स्थिति फेला पार्न निश्चित हुनुहोस्।
पछिल्लो पुस्ताको एक मात्र एसईओ उपकरण जुन यसलाई सजिलै र सस्तोमा पूरा गर्न विभिन्न सुविधाहरूले सुसज्जित छ। समर्पित SEO ड्यासबोर्ड।
त्यसोभए, यो उपकरणले तपाइँलाई स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा आफूलाई राम्रो स्थिति बनाउन कसरी मद्दत गर्न सक्छ हेरौं।
पहिलो, हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण छ
समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा Google SERP विश्लेषण भनिने सुविधा छ। जसले तपाइँलाई तपाइँको सम्भावित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धीहरू प्रत्येक आलामा को हुन् भनेर जान्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसले तपाइँलाई उनीहरूको ट्राफिक उत्पन्न गर्ने कुञ्जी शब्दहरू प्रदान गरेर तिनीहरूको प्रत्येक जैविक वा सशुल्क पदोन्नति रणनीतिहरू प्रकट गर्दछ। यस तरिकाले, तपाईंले आफूलाई कसरी स्थिति दिने भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि यस उपकरणले तपाईंलाई पहिले नै बाटो देखाउँछ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको बजारको अधिकतम फाइदा लिन र डिजाइनमा अगाडि बढ्नको लागि कार्य गर्नु हो।
दोस्रो, हामीसँग एसईओ अडिट छ
प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गरिसकेपछि, हामीले प्रतियोगीहरूको साइटहरूको प्रयोगकर्ता-मित्रता र प्राविधिक पक्षलाई हाम्रो साइटसँग तुलना गर्नको लागि सोच्न आवश्यक छ। यो गर्नको लागि, एक गहन एसईओ अडिट महत्त्वपूर्ण छ।
यो समर्पित SEO ड्यासबोर्डको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू मध्ये एक हो। यस सुविधाको साथ, तपाइँ कुनै पनि वेबसाइटको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक अडिटिङ देखि साइट लोड गति परीक्षण र साहित्यिक चोरी जाँच सम्म सबै।
SEO ड्यासबोर्डमा तपाईको SEO रणनीतिको प्रगति ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न अन्य धेरै सजिलो सुविधाहरू छन्। यसले तपाईंलाई थप ट्राफिक प्राप्त गर्न के सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने वा हटाउने बारे प्रत्येक पटक जानकारी दिन्छ। अर्को शब्दमा, यो तपाइँको SEO रणनीति को द्वारपाल हो।
त्यसोभए, यदि तपाइँ तपाइँको परियोजनामा ​​धेरै छिटो जान चाहानुहुन्छ भने, म तपाइँलाई यी समावेश सुविधाहरू मध्ये प्रत्येक पत्ता लगाउन दिन्छु। तपाईंसँग एक हुनेछ 14 दिन नि: शुल्क परीक्षण अवधि आर्थिक रूपमा प्रतिबद्ध गर्नु अघि यस उपकरणको कार्यसम्पादनलाई अनुमोदन गर्न।
विदेशमा तपाईंको वेबसाइट तयार गर्दा ध्यानमा राख्नको लागि यहाँ ठोस आधारभूत कुराहरू छन्
विदेशी स्थिति को मामला मा, तपाईं एक ठोस आधार को ख्याल गर्न आवश्यक छ, जसमा समावेश छ:
उपयुक्त वेबसाइट संरचना;
धेरै पटक लक्षित भाषामा नयाँ सामग्री वा तिनीहरूको विस्तार;
बहुभाषिकताको सन्दर्भमा अनुक्रमणिका रोबोटहरूको लागि समर्थन;
र मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुकूलन।
Google र अन्य खोज इन्जिनहरूले वेबसाइटहरूको उच्च गुणस्तरमा ठूलो जोड दिन्छ। जैविक परिणामहरूमा, तिनीहरूले प्रयोगकर्ताको अपेक्षाहरू पूरा गर्ने र उहाँलाई सबैभन्दा अनुकूल हुनेहरूलाई बढावा दिन्छन्। बजारहरू बीचको भिन्नता भए पनि, यो नियम परिवर्तन हुँदैन।
अरू मध्ये, Google र Bing ले वेबसाइट मालिकहरू र प्रशासकहरूलाई नि:शुल्क वेबमास्टर उपकरणहरू पहुँच गरेर तिनीहरूको गुणस्तर सुधार गर्न सक्षम गर्दछ। उदाहरणका लागि, गुगलका लागि यी हुन्, अरूमध्ये:
Google खोज कन्सोल
संरचित डाटा परीक्षण उपकरण
अर्कोतर्फ, तपाईंसँग समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड पनि छ जसले साइटहरूको गुणस्तरको हेरचाह गर्दछ यी कुनै पनि निःशुल्क उपकरणहरू भन्दा धेरै राम्रो।
किनकि यसले अनुमति दिन्छ:
गुणस्तर र उपयोगिता सम्बन्धी त्रुटिहरू र सिफारिसहरूको लागि वेबसाइट अनुगमन, साथै खोज इन्जिन परिणामहरूमा हालको प्रभावकारिताको प्रमाणीकरण;
वेबसाइट गति र कोर वेब महत्वपूर्ण तत्वहरू परीक्षण गर्ने क्षमता;
संरचित डाटा इम्बेडिङ को शुद्धता को प्रमाणिकरण।
के मैले लक्षित देशमा डोमेन किन्नु पर्छ?
स्थिति प्रक्रिया मा एक महत्वपूर्ण मुद्दा डोमेन हो। विदेशी वेबसाइटको ठेगानाले सम्भावित ग्राहकहरूको नजरमा यसको स्थिति र यसको स्वागत दुवैलाई असर गर्छ।
सामान्यतया, मनपर्ने समाधान दिइएको क्षेत्र वा देशमा समाप्त भएको डोमेन प्रयोग गर्नु हो, उदाहरणका लागि:
ग्रेट ब्रिटेनको लागि .co.uk
.fr फ्रान्सको लागि
विदेशी बजारहरूको लागि स्थितिमा, .com सँग अन्त्य हुने डोमेन ठेगानाहरू पनि प्रयोग गरिन्छ, तर यस्तो संस्करण सधैं सिफारिस गरिँदैन। दिइएको बजार र इच्छित प्रभावहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनाको सन्दर्भमा यो अग्रिम प्रमाणित गर्न लायक छ।
यद्यपि, यदि तपाइँ एक डोमेन ठेगाना र यसरी एउटा वेबसाइट प्रयोग गरी विभिन्न भाषा संस्करणहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने, .com विस्तार सम्भावित रूपमा उत्तम समाधान हो। .com डोमेन, अर्थात् शीर्ष-स्तर डोमेन, यसको सामान्य प्रकृतिको कारणले केही विशेषाधिकारहरू छन् - यो सिद्धान्तमा कुनै पनि देशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के तपाईंले विदेशी साइटको लागि होस्टिङ खरिद गर्नुपर्छ?
स्थितिको प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, नयाँ सर्भर वा होस्टिंगको खरीद आवश्यक छैन तर निश्चित रूपमा सिफारिस गरिएको छ।
प्रयोगकर्ताको स्थानमा होस्टिंग वा प्रोक्सी सर्भरहरूको नेटवर्कको प्रयोगले स्रोतहरूको लोडिङ समय कम गर्नेछ र - त्यसैले वेबसाइटको। यो वेबसाइट छिटो प्राप्त गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक उल्लेखनीय लाभ हुनेछ।
होस्टिङ वा सर्भर IP ठेगाना आफैमा एक श्रेणीकरण कारक होइन। शीर्षमा रहेका तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको वेबसाइटहरू प्रमाणित गरेर, तपाइँ आफैंले समान निष्कर्षहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो बाहिर आउन सक्छ कि प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूको आईपी ठेगानाहरू देशसँग मेल खाँदैन जहाँ तिनीहरू देखिन्छन् र SEO गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्छन्।
यस्तो अवलोकनले तपाइँलाई यो सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ कि सर्भर स्थान मुद्दाले स्थिति प्रभावहरूलाई असर गर्दैन र यसको खरिद SEO प्रभावहरूमा अनुवाद गर्दैन।
विदेशमा होस्टिंगको विकल्प भनेको क्लाउडफ्लेयर जस्ता सेवा प्रयोग गर्नु हो, जसले विश्वभरि पनि तपाईंको वेबसाइट लोड समय घटाउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण रूपमा - विभिन्न स्थानहरूमा होस्टिङ खरिद गर्न आवश्यक बिना।
वेबसाइटलाई विदेशी स्थानमा राख्नको लागि भौतिक ठेगाना आवश्यक छ?
दिइएको वेबसाइटको लागि एसईओ गतिविधिहरू लागू गर्दा, एक तत्वले खोज इन्जिन र प्रयोगकर्ताहरू बीच अधिकार निर्माण गर्दैछ।
NAP (नाम, ठेगाना, फोन नम्बर) व्यवसाय कार्डहरू सहयोगी हुन्छन्, अर्थात् सम्पर्क विवरणहरू, साथै आधारभूत डेटा सहितको उद्योग निर्देशिकाहरू, जसमा दिइएको स्थान/देश बाहेक अन्य डेटा थप्न प्रायः असम्भव हुन्छ।
थप रूपमा, ठेगाना डाटा Google My Business कार्डहरू प्रमाणीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले स्थानीय रूपमा र Google नक्साबाट ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई बढाउँछ।
वेबसाइटमा आधारभूत सम्पर्क जानकारी समावेश गर्न र यसलाई संरचित डेटाको साथ चिन्ह लगाउन पनि सल्लाह दिइन्छ। यसले वेबसाइटमा आगन्तुकहरूको विश्वास बढाउनेछ र अज्ञात ब्रान्ड र साइटहरूको डर तोड्न सक्छ।
यदि तपाईं शाखा कार्यालयको मर्मत सम्भारको लागतहरू उठाउन चाहनुहुन्न भने, तपाईंले सस्तो विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - दिइएको देशमा भर्चुअल अफिस सेवा खरिद गर्नुहोस्।
निस्सन्देह, एसईओ गतिविधिहरू कम्पनीको भौतिक शाखा बिना गर्न सकिन्छ, तर यसले लिङ्कहरू प्राप्त गर्न र स्थानीय स्थिति रणनीतिहरू योजना बनाउन केही हदसम्म मद्दत गर्न सक्छ।